Welllọ ọrụ Maxwell mepụtara ọgwụ ọgwụ
site na nhazi na 20-06-19
Ọgwụ bụ ihe ma ọ bụ nkwadebe nke igbochi, ọgwụgwọ ma ọ bụ nchọpụta ọrịa nke ụmụ mmadụ na anụ ụlọ. Na ndabere, isi ogwu nwere ike ekewa umu ogwu na eke ihe nkpuchi. Ọgwụ nwekwara ike igbochi ọrịa, gwọọ ọrịa, belata ihe mgbu, melite ahụike ...
A na - ekewa anyaji, nke eji acha eriri ma obu ihe ndi ozo, uzo abuo - ihe di iche iche sitere n'okike na ihe ndi ozo, tinyere ihe eji eme oyuyo, udu ocha, sọks, ihe ndi ozo, etere uhere. bụ ihe eji eme ntụ ntụ ...
Ngosiputa Ngwa: ihe ndi eji aru mmadu mee ka ọdi nma, ijigide ma obu gbanwee odidi mmadu, ma obu ihe iji mee ka aru, ntutu, ntu, anya, ma obu ezé kpuchie ya. Nkeji ihe ntecha; Nkewa site na nsonaazụ: Ngosiputa nka na nkerisi…
Mbipụta ink dee ya
Mpempe akwụkwọ na-ebi akwụkwọ bụ ihe dị mkpa eji ebi akwụkwọ, ọ na-egosi usoro na ederede na mkpụrụedemede ahụ site na ibipụta akwụkwọ. Inks nwere ihe ndị bụ isi na ihe enyemaka. Site na ịgwakọta na ntughari ugboro ugboro, ọ na-abịa viscosity slurry. Ihe mejupụtara ya ...
Nrapado: ofdị ihe eji eme ihe, ihe eji mara ma ọ bụ roba ， organic ma ọ bụ inorganic, nke na - ejikọ akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa ọnụ site na nrapado na cohesion. A makwaara dị ka gluu. Na nkenke, ọ bụ ijikọ ihe glued ọnụ site na njikọkọ ...
“AKW MANKWỌ ND MAN NA-AK MANZI” N ’AKWTERKWỌ NSỌ N’ALAEZE N’ EGO GERMANY: 1- 5 DECEMBER 2019
Ọnọdụ akụ na ụba dị ugbu a, òtù ndị na-emepụta ihe ga-echebara akụkụ ndị dị mkpa dị ka ịghọta na ịnabata teknụzụ ndị mepere emepe, ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ / njikọ aka na ụlọ ọrụ ndị ọzọ maka ịmepụta ụdị azụmahịa ọhụrụ, hazie ụzọ ọhụrụ nke nhazi ...